Midowga Musharixiinta oo War kasoo saaray Go'aankii Xukuumadda ee ONLF iyo Xaaladda Hiiraan - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Midowga Musharixiinta oo War kasoo saaray Go'aankii Xukuumadda ee ONLF iyo Xaaladda Hiiraan - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Midowga Musharixiinta ayaa war kasoo saaray go’aankii xukuumadda xilgaarsiinta ee dib looga noqday in argagixiso lagu tilmaamo ururka ONLF iyo dhiibistii Qalbi-dhagax.
Qoraalka Midowga Musharixiinta ayaa lagu bogaadiya Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo sidoo kale looga digay saraakiisha milateriga inay siyaasadda ku lug yeeshaan, isla markaana arrinta tabashada reer HiiRaan y u baahan tahay xal siyaasaded.
Golaha Midowga Musharaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa go’aanka ka soo baxay Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Go’aankaas oo ahaa mid aad loogu riyaaqay islamarkaana saxay khaladaad siyaasaded oo meel ka dhac ku ah qarannimada Soomaaliya.
Waxay ahayd taariikh madow oo mugdi ah in ururka gobanimo-u-dirirka ah ee ONLF lagu asteeyo argagaxisanimo iyadoo ay Dowladda Soomaaliya ku keli noqotay qaadashada go’aankaas gurracan iyo dhiibistii muwaadhin Cabdikariim Sheikh Muuse (Qalbidhagax) loogu gacan geliyay Dowladda Ethiopia, tallaabooyinkaas oo xadgudub ku ahaa xuquuqda muwaadhinka, sumcadda iyo dowladnimada Soomaaliya.
Goluhu wuxuu u hambalyeynayaa Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumadiisa go’aanka geesinimada iyo wadinaydda xambaarsan oo ay qaateen kaas oo saxay khaladaadkii Dowladdu hore u gashay. Golaha Midowga Musharaxiinta wuxuu uga digayaa saraakiisaha ciidan ee garabka ka helaya Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda.
Tabashada reer Hiiraan waa mid u baahan xal siyaasadeed, mana aha in olole doorasho loo adeegsado. Goluhu wuxuu ku boorinaayaa Raysal Wasaare Rooble in uu u madaxbanaanaado maamulka, hagidda iyo dar-dargelinta doorashada.
Previous articleMusharixiinta 3 Kursi oo lagu diiwaan geliyey Kismaayo iyo xildhibaanadii hore ugu fadhiyey oo laga xiray..
Next articleXOG: Kursiga qarxiyey dagaalka siyaasadeed ee Dirta Waqooyi (Farmajo, Rooble, Kheyre & Sh. Sharif)